မောင်တိုင်ပင် ဧ။် အတွေးပုံရိပ်များ: ဆန်နှင့်ပတ်သက်၍တွေးမိသမျှ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးအထူးသတိထားသူတွေဟာသူတို့နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာလူကိုဥပါဒ်ပေးနိုင်တဲ့ ဘာဓါတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေသလားဆိုတာအထူးသတိပြုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးစိတ်ချရမှစားသုံးပါတယ်။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စားစရာတွေထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်၊အဆိုပါစါးစရာ snacks တွေထဲမှာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့စားစရာဘယ်နှစ်မျိုးပါဝင်နေပါသလဲ ?ဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်းဟောပြောချက်တွေထဲမှာကမ္ဘာမှာကောမြန်မာမှာပါ autoimmune ရောဂါ( ခုခံအားကစင့်ကလျားဖြစ်တဲ့ရောဂါ)တွေအဖြစ်များနေတဲ့အကြောင်းသူ့ဟောပြောချက်တွေထဲမှာနားထောင်ရပါတယ်၊အချို့ကတော့အစားအသောက်အနေအထိုင်မဆင်ခြင်တဲ့အတွက်အူလမ်းကြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ရောဂါ တွေဖြစ်နေကြ တယ်လို့ ပြောပါတယ်၊
လူတွေအသိများပြီး စားစရာမှာပါဝင်နိုင်တဲ့ထင်ရှားသောဓါတုပစ္စည်းတွေကတော့--ပိုးသတ်ဆေးအကြွင်းအကျန် pesticide residue အာဖလာတော့ဆင် aflatoxins, gluten, frutose, artificial sweeteners,MSG Monosodium glutamate, food chemicals codex (FCC) နဲ့မညီတဲ့ဆိုးဆေး၊စသည်ဖြင့်ရှိကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာကျနော်ပြောချင်တာက gluten ဓါတ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂလူတင် ဟာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားဖြစ်ပေါ်မှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်၊အူနရံတစ်လျောက်ပါးလွှာသွားစေတတ်ပါတယ် တဲ့။ထင်ရှားတာကတော့Celiac disease ဖြစ်ပါတယ်၊ဒီရောဂါဟာအတိုချုပ်ပြောရရင်လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစါချေစနစ်ကိုဖျက်ပစ်တတ်ပါတယ်၊ ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်မယ် ဗိုက်နာမယ် ဝမ်းဗိုက်ပြည့်နေလိုခံစားရမယ် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့လာမယ် မောပန်းလွယ်မယ် ဒီလက္ခဏာတွေခံစားရလာနိုင်တယ်။ဂလူတင်ဓါတ်က ဂျုံ ဘာလီ rye လို့ခေါ်တဲ့ဂျုံရိုင်းတွေမှာ ပါတယ် လို့သုတေသီတွေကဆိုကြပါတယ်။
ဂလူတင်ဓါတ်ဟာ ဆန်မှာပါနေသလားဆိုတာဆန်စပါးကိုအမြဲလေ့လာနေတဲ့ကျနော်ကသိချင်လာတာပါ--ဆရာမကြီးရဲ့ဟောပြောချက်တွေထဲမှာ ဂျုံ ကတော့သေချာပေါက်ပါတယ်၊ ဂျုံကပြုလုပ်တဲ့ ပေါင်မုန့် ကိတ်မုန့် ဂျုံခေါက်ဆွဲစတဲ့ စားစရာတွေကို ထမင်းလွတ်စားခဲ့တဲ့ သူလူနာတွေထဲမှာ Celiac ရောဂါလက္ခဏာအခြေအနေတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်၊ သူကဆန်ဆိုပေမဲ့ GMO ဆန်တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်၊ genetically modified ပေါ့။ ဆန်စပါး terminoligy တွေနဲ့အကျွမ်းမဝင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ Hybrid rice အဖိုပင် အမပင် နဲ့စိုက်ရတဲ့စပါးမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဦးသိန်းစိန်သမ္မတကြီးလက်ထက်ကစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကရူးသွတ်ခဲ့တဲ့ ပုလဲသွယ် စပ်မျိုးစပါးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ ဂလူတင် ဓါတ်ကိုစမ်းသလား မစမ်းခဲ့ဘူးလား ကျနော်တော့ မသိပါ။ သိသူတွေရှိရင် မန့်ပေးကြပါအုံး။
ဆရာမကြီးကတော့ သူပိုစ့်ထဲမှာ ဒီလိုရေးထားပါတယ်
" Gluten ဟာ အောက် ဖော် ပြ ပါ ပြဿနာ များ ကို ဖြစ် စေ တတ် တဲ့ အကြောင်း တစ်ပါး ထဲ မှာ ပါ ဝင် နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
၁. ရင်ပူ ခြင်း
၂. လေထ ခြင်း/ လေပွ ခြင်း
၃ ဗိုက်နာ၊ ဝမ်းလျော၊ ဝမ်းချုပ်
၄. Autoimmune ရောဂါ မျိုးစုံ
၅. ပင်ပန်းနွမ်းလျ ၊ အားမရှိ
၆. ခေါင်း ကိုက်
၇. သွေး အားနည်း
၈. စိတ်ဓာတ် ကျ ဆင်း ခြင်း
၉ . အရိုးပါး ခြင်း
၁၀. မူးဝေတတ် ခြင်း၊ နားအူခြင်း၊ လေထွက် ခြင်း
၁၁. အရေ ပြား ရောဂါ မျိုးစုံ၊ ဝဲနှင်းခူ
၁၂. သားသမီး မရ နိုင် ခြင်း
( autoimmune နှင့် ဆက်စပ် နေ တတ် ပါ တယ် )
ရှေးရှေး က အစားအစာ တွေ နဲ့ ယခုခေတ် အစားအစာ တွေ ဟာ အရည်အသွေး မတူ ကြ တော့ ပါ။
ရှေးရှေး က တော့ သဘာဝ အတိုင်း
အစေ့ မျိုးရို ဗီဇ က လည်း ပင်ကိုယ် သဘာဝ ဖြစ် ပါ တယ်။
အခု ခေတ် မှာ က တော့ -----
အစေ့ မျိုးရိုးဗီဇ တွေ လဲ ပြောင်း လဲ
ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်း သတ်ဆေး
သဘာဝ အနေ နဲ့ အစား အသောက် တွေ ရဲ့ ပုံစံ ဟာ လည်း ပြောင်းကုန် ပြီ မို့ကိုယ် က ဒါ တွေ ကို နားလည် သဘော မပေါက် ဖူး ဆို ရင် ရောဂါ သံသရာ မှာ ချာချာ လည် ကြ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
အဆိပ် မျိုးစုံ ခြံရံ ပြီး နေ ရ တဲ့ ဘဝ မှာ အစာ ပါ မကျေ တဲ့ ရ လာဘ် က တော့ Autoimmune ရောဂါ မျိုးစုံ ပါ ပဲ။"
credit: Toabetter health
" ဆန်သည် Gluten free မဟုတ် ပါ။ဆန် က အစေ့ အမျိုးအစား grains တွေ ထဲ မှာ ပါ နေ ပါ တယ်။
ဆန် ထဲ မှာ ပါ နေ တဲ့ gluten ရဲ့ အမည် က တော့ Oryzeninဖြစ် ပါ တယ်။
ထို နည်း တူ စွာ ပြောင်း ဖူး မှာ ပါ နေ တဲ့ gluten က Zein ဖြစ် ပါ တယ်။"
ထိုင်းမှာ၂၀၁၆ခုနှစ်လောက်ကဘုရင်ဆွေတော်မျိုးတော်တစ်ယောက်နဲ့သိကျွမ်းခဲ့ရပြီးသူက Berry rice အကြောင်းကိုပြောပြပြီးဆန်နမူနာတစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။
ကောက်ညှင်းငချိတ်လိုအရောင်အသွေးမျိုးရှိပါတယ်။ health food အနေနဲ့သူတို့ မျိုးစပ်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်--ကျနော်ထင်တာကတော့ အနည်းငယ်သာပါဝင်နိုင်တဲ့ ဂလူတင်ဓါတ်ကို agronomy နည်းပညာနဲ့ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး Berry rice ဆိုပြီးထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၂၀၁၆မှာ ထိုင်းကိုသွားတော့ Big C မှာ Berry rice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ promotion တစ်ခုလုပ်နေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့မနက်အတွေးတွေပေါ်လာတာကတော့မြန်မာဆန်ပြည်ပတင်ပို့တဲ့အခါ အီးယူ က long grain rice တွေကို prefencial treatment မပေးတော့ဘူးဆိုတော့ အလားတူရနေကြတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား လာအိုတို့ထက်မြန်မာကတပန်းသာနေတဲ့အကြောင်းဖတ်ရပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာကစပါးအမျိုးစုံစိုက်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ long grain ကိုလျှော့ပြီး medium grain တို့ short grain တို့ပို့နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိနေတယ် လို့သုံးသပ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ဆီမှာ အရင်ကော အခုထိကော အစိုက်များတဲ့ စပါးအမျိုးအစား တစ်ခုက ငစိန် လို့ခေါ်တဲ့ medium grain ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ medium grain ကိုသီးခြားစားသုံးကြတဲ့ ဈေးကွက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ထင်ရှားတာကတော့ အီဂျစ် ပါ။ အခုဆိုရင် ထိုင်းဆန်ခေါက်ဒေါ့မာလီ long grain rice ဟာ ကမ္ဘာအနှံ့ပို့ခဲ့တော့ဆန်စားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းလိုလို နဲ့ဥရောပတွေအထိကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရောက်ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ ထိုင်းဆန်ပဲရှိတော့မညည်းမညူနိုင်ပဲကြိတ်မှိတ်စားနေရပါတယ်။ဆန်အနေနဲ့သာ အမြင်လှတာပါ။ ထမင်းချက်လိုက်တဲ့အခါ eating quality ကတော့ထိပ်တန်းမှာမရှိပါ။ တခါတလေတော့ လည်းပေါ်ဆန်း တို့ မနော်သုခ တို့လိုဆန်မျိုးကချက်တဲ့ထမင်းစားချင်လာပါတယ်--
ကျနော်လိုပဲထိုင်းဆန်ကိုအပြောင်းအလဲစားချင်နေကြတဲ့ consumers တွေလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိကြမှာပါ။ ပေါ်ဆန်းဟာလုံးရှည်တွေအမြင်များနေတဲ့အတွက် short and round grain ဟာအမြင်ဆန်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပေါ်ဆန်းထုတ်လုပ်မှုဟာအခြားစပါးတွေနဲ့ယှဉ်ရင်အတော်အတန်နည်းနေတတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း ဝယ်လိုအား ကလည်းများပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုပို့တဲ့အခါ ပြည်တွင်းဈေးထက်ပိုမရနိုင်တော့ လို့ exporter တွေလက်ရှောင်ကြပါတယ်၊ productivity တက်လာမယ်၊ ပြည်ပဝယ်လိုအားက တက်လာမယ်၊ ဆိုရင်ဒီဆန်ချောအမျိုးအစားကို ဒေသတော်တော်များများမှာ တိုးချဲ့ စိုက်ပျိုးလာကြမယ်ဆိုရင်တော့အလားအလာရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ ထိုင်းတွေလည်းသူတို့ခေါက်ဒေါ့မာလီကို ကမ္ဘာဆန်စားသုံးသူတွေအကြားမှာ ရိုးအီလာနေပြီဆိုတာသူတို့လည်းသတိပြုမိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗြုန်းဆို short and round grain ပေါ်ဆန်း ကို သူတို့ဆီမှာမျိုးထုတ်လုပ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိုက်ပြီး အဆက်အသွယ်ကောင်းတဲ့ သူတို့က များကမ္ဘာကိုများတင်ပို့ လိုက်လို့တော့ ကျုပ်တို့တတွေဟုတ်ပေ့ရှိနေပါလိမ့်မယ် ဆရာတို့ရေ--
Posted by MaungTaing Pin at Saturday, February 16, 2019
Business Center လိုတယ်